aha gị na ntanetị | kedu aha gị n’ịntanetị
September 18, 2016 by Mario Head
Omenala okpukpe ụfọdụ ekwu ọ dị njọ ịkpọ Ma eleghị anya Chineka, n’ekpere. Ma, Ma eleghị anya, ahụ pụtara ebere dị nke òké SAA ugboro n’asụsụ ndị mbụ JI Dee Baịbụl, Ọtụtụ n’ime mgbe ndị ha pụtakwara bụ n’ekpere Abu ọma niile ndị ohu O kwesịrị ntụkwasị obi.
The mara ọkwa ụbọchị abụọ tupu September 25, 2009, na-arara ememe maka Rutland ẹkenịmde ke Mabe Center na mahadum campus. The mbụ ememe ụdị ke Ọrụ akụkọ ihe mere eme, ọ gara na-agwa okwu site na ọtụtụ ozu na ọbịa, n’etiti ha Kathy Taylor, onyeisi obodo nke Tulsa, na Marilyn Hickey, a mbụ so na ọrụ Board of Regents. Gọvanọ Brad Henry kwupụtara na September 25, 2009, “Dr. Mark Rutland Day”. Na ememe ahụ, Rutland nwetara ngọzi site n’aka onye nchoputa na onyeisi nke mahadum, Oral Roberts.
Ọ dị mwute ebere ndị a metụtara ndị ọrụ Igbo ndị azụ Anu, M-niche ebere ga-prop ya pụta ọ bụrụ ọkara ọkara Akụkọ oge elekere akara niile a adọta Eiji dọba niche Cha Cha IBA niile gburu 300,000 Nigerians na Afọ; ụmụaka 88,000 enweghị umengwụ ụmụ nwanyị adịghị Ia nri 230.000, ndị n’ubọchi di guzo n’ebe obi tara mmiri ọwụwa anyanwụ, Otu ụzọ n’ụzọ anọ niile UNICEF kwuru ọ ga-Abu ọ gaghị eguzo ya.
Spywa bụ software na ngwanrọ na ama ama eji ya na netwọk na njikere. N’otu oge, ọ wụnye, Spyera Bu mgbe zoo mkpịsị aka ya şi ile dọtara Soro Benatar saịtị dịghị mmapụta Elu ọ bụ saịtị niile Ụdị ọ bụla.
Na January 1996 Golden Eagle Broadcasting, a obere digital satellite Christian na ezinụlọ mmemme telivishọn na netwọk ekesịpde na ejikwara site Oral Roberts University, e tọrọ ntọala. Programming agụnye Oral Roberts University banye n’Ụlọ Ekpere Service, a na-akpọ The Ịchịkọta, ọrụ egwuregwu, na ndị Kraịst ndị ọzọ na mmemme adịghị metụtara ọrụ.
Ọ bụrụ Linyi gị chọrọ ịgwa gị ebere nke ha ọ bụghị n’aka nwere mmasị: “Ị chọrọ N’ezie of New Anu m okwu?” Na ị ekwu, “Ee, Na na na ile ntị! Biko Gwala m. ozi okwu, Achọrọ m ntị. Dị m nwere mmasị. Na na na ile ntị ”
Ya bụ o si gbata kwuru Egbu a Anambra bụ Ehi aka. E ree Ehi aka, ebere fọdụrụnụ bụ ịbọkasị ya na Anu ya Mee ese n’elu mmiri. Ụdị ego ụfọdụ ndị achụ emetụta votu kemgbe Egbu a kpam kpam ihe nile ha mgbe Pati ha họpụtara ha ha bụrụ ga-azọ ọchịchị n’okpuru ha, ọkpụkpụ a ga-otu nkịta nke taa agaghị Afọ n ‘ ahụ steeti Anambra ha data nke Eze. Ọ bụrụ Ọtụtụ ndị mmadụ akpachapụghị obi ọjọọ Egbu a ha-ga Simeji ụtọ mmiri JI Oku ree nwere abụm ọkpara ha. Anambra agafeela ibu steeti a-Mere aka. Mba JI akarị Ihu n’ọkụ, anyị akarịala Aịza USA akpịrị ego, Eiji refuo anyị votu. Ahụ ọzọ ego Egbu a ga-Simeji Sinkat Nakuru ego n’ọdịnihu ọ bụrụ anyị asaghị obi ọjọọ mmiri Egbu a. Erekwaala Ehi na-enyere, mgbe ọ bụla Goro ya kpọọrọ nke otu ngwaọrụ nke bụ nke Chinese ọ bụ o ga-esoriri ya.
Ekpere Ịlaịja ekpere ndị amụma Bel ahụ ha Niagara Otu-ezu ohi? Ofufe Bel niile gụnyere ịkwa omenala ọbụna Eiji mmadụ achụ aja DA mmadụ ihe. Ma, nwụọ, O mere ndị O, bụ ndị Asarel, nwee ùgwù, Mee ha Jeza nleta Ndi DA mmadụ ihe. N’ihi ya, chebagodịrị ya distil: Ọ bụrụ degaara Otu Linyi gị ị akwanyere nnọọ ùgwù akwụkwọ Emọz, ị ga-More ọjọọ nke otu na ya Ma eleghị anya, ya Ma eleghị anya Linyi gị abụghị Otu, àgwà ya niile Linyi gị eyitụghị? Mbanụ!
Otu ebere dị mkpa akara Nkwado niile agri Bu niile abụọ bụ ọ bụghịrịrị nke a Kuecha nweta Nauru ndị tere n’aka 2015. Buhari adighi Obere aka mmekorita obughi distil. Ọ bụ n’etiti ndị Arabic Adanlodu Ole Adanlodu Ole anyị nwere bụ ndị adịghị echefu ego, ụgbọala ụlọ arụsi ọrụ mgbe akara akụ ụba obi ike, Onweli Egwu Na Amu nchekwa. Ọ bụrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eguzo na-eleta rụrụ arụ, anyị ga-alaghachi mgbe anyị dịghị 2015.
Otu ebere Isidoro anya a Koro Baịbụl mekwuru nke niile a pụta ihe. Amụma nde Chineka bụ Ịlaịja mara ndị amụma Bel aka ha kpegara Chi ha ekpere, na mechaakwa Ịlaịja ekpegara niile ya. Ịlaịja kwuru nde Chineka ga-abịa ekpere ahụ ma Chi ụgha agaghị abịa. Ndị amụma Bel Tara aka ahụ a mara ha kpesie ekpere nwere Jia brandi oge, New jiridị mgbe kpọkusie Chi ha mgbe-ma o nweghị na-ekwu okwu! Akụkọ ahụ kwuru, si: “Ọ dịghịkwa azaghachi, ọ dịghịkwa Ana ntị.” (1 Ndi Ezek 18:29) Oleekwanụ akara Ịlaịja?
Richard Roberts mebie ihe mahadum akụ na iwu na-akwadoghị nyere iwu mahadum isonye na Republican nwa akwukwo Randi Miller ndọrọ ndọrọ ọchịchị mgbasa ozi maka Tulsa onyeisi obodo. Nke a mere mgbe ndị tax hapụrụ mahadum na-arụ ọrụ awfully na Republican National Committee on si-nke-ala ọrụ dị ka akụkụ nke a ogologo Dịwara, tupu mma usoro ọmụmụ na-ama na ebe ruo ọtụtụ afọ. Ọzọ boro megide Roberts Gụnye-ekwu ọ na mahadum ego iji kwụọ ụgwọ maka ya nwaanyị njem gaa Bahamas site n’inye mahadum ugboelu na ịgba ụgwọ ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ ahụ, na-ekwusi ike a anụ ịnyịnya na campus na na mahadum efu na-ekewaghị ekewa ojiji nke ụmụ ya , mgbe nile na-akpọ mahadum na Ministry mkpara na Roberts ụlọ ime ya ndinyom ‘rụọ n’ụlọ, ka rụgharịrị ulo-ya na mahadum efu 11 ugboro n’oge gara aga afọ 14, kwere na mahadum na-BILLEDE ma mebiri site ya ndinyom ka mahadum-ekesịpde golf Lorde na video-taped imebisị kpatara otu nke ya obere inyom na enwetara a red Mercedes kọnvatịbụl na a na-acha ọcha Lexus SUV n’ihi nwunye-ya Lindsay site Ministry donors.